Mas’uuliyiin katirsan Dowladda oo Kenya laga soo Celiyay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mas’uuliyiin katirsan Dowladda oo Kenya laga soo Celiyay
Waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho soo gaaray Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya kuwaas oo laga soo celiyay Garoonka Diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee Dalka Kenya, halkaasi oo ay ku xayirnayeen in ka badan 15 Saacadood.
Mas’uuliyiinta la soo celiyay ayaa waxa ay kala yihiin Senetor Ilyaas Cali Senetor Zamzam Daahir oo katirsan Aqalka Sare iyo Wasiir ku-xigeenka Tamarta iyo biyaha Cismaan Libaax,kuwaas oo xalay ku hoyday Garoonka Diyaaradaha ee Jomo Kenyatta,kadib markii Dowladda Kenya ay u diiday in Baasaboorka diblomaasiga ah ay wateen in loogu dhufto Fiisaha dalka ku galka Kenya.
ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Dowladda Soomaaliya oo ay kaga hadleyso Falkan ay dowladda kenya kula kacday Mas’uuliyiintaan katirsan Dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale warar kale oo anu helnay ayaa sheegay Mas’uuliyiintan ay qeyb ka aheyeen Wafdi Dowladda Soomaaliya uga qeyb gali lahaa Shir maanta ka dhacaya Nairobi, kaas oo looga hadlayo maareynta dhibaatooyinka ka dhaca Xuduudaha.
Sikastaba ha ahaate dadka falanqeeya Siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay talabadan ay qaaday Dowladda Kenya, iney ugu gon lee dahay iney joojiso Muran badeedka kala dhaxeeya Soomaaliya.
Previous articleFaah faahin laga bixiyay qaraxii ka dhacay Muqdisho
Next articleAbiy oo qabtay casho lagu gelayey $173,000
DEG DEG: Qarax baabuur oo ka dhacay Muqdisho